ဓမ္မဂင်္ဂါ: ၂၀၁၀ ဓမ္မဂင်္ဂါနောက်ဆုံးဝိကီလိခ်
စာသင်ခန်းထဲက ထွက်လိုက်သည်နှင့် နှင်းဦးထုပ်ပျော့ပျော့ဆောင်းထားသော မိဂဒါဝုန်လေညှင်းသည် တက္ကသိုလ်ပရိဝုဏ်မြက်ခင်း စိမ်းစိမ်းများပေါ်နားနေသည့် ငှက်ငယ်များကို တိုးဝှေ့ကာ သူ့ရင်ဘတ်ကို ဖွဖွလေး ပုတ်လေသည်။ သူက အမိန့်ကြော်ငြာစာ စာရွက်လေး တစ်ရွက်ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုနေမိပြန်သည်။ ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလတွင် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာသံဃာ့ညီလာခံကြီးကျင်းပရေးကော်မတီဝင် အဖြစ် သူ့ကို ခန့်အပ်ကြောင်း ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။
ထိုကြေငြာချက်မထွက်မီ လွန်ခဲ့သော ရက်ကပင် ညီလာခံကျင်းပရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌြ့ဖစ်သူ ပါမောက္ခဒေါက်တာရှဆကြိက သူ့ကို ဖိတ်ကြားကာ ၀ိနည်းဆိုင်ရာ ပိဋကတ်ဝေါဟာရများကို သက္ကဋ၊ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများနှင့် ညှိနိုင်းပေးဖို့ အကူအညီတောင်းထားသေးသည်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ တက္ကသိုလ် ဒုတိယ-အဓိပတိ(ပါမောက္ခချုပ်) ရုံးခန်းက ဖုန်းဆက်ဖိတ်ကြားကာ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အဆိုပြုခန့်ထားခဲ့တော့သည်။ ယနေ့နံနက် တရားဝင် အမိန့် ကြော်ငြာစာ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သူသည် နိုင်ငံတကာသံဃာ့ညီလာခံကြီးတွင် စာတမ်းဖတ်ကြားသူအဖြစ်သာမက မင်္ဂလာပါဠိဂါထာရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနားဖွင့်ရန်လည်း တာဝန်ယူထားရသေးသည်။ သူ့မိတ်ဆွေများကတော့ ညီလာခံပြီးလျှင် သူ့ဘလော့ကို မဖွင်တော့ဟု အတိအလင်းကြေငြာထားကြသည်။ အခမ်းအနားတွင် ၁၊ ဒလိုင်လားမား ရဟန်းမင်းကြွရောက်လာခြင်း၊ ၂၊ ဆီမီးညှိထွန်းခြင်း ၃၊ ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရ (ပါဠိဌာန ဧည့်ပါမောက္ခ)က ပါဠိဘာသာဖြင့် မင်္ဂလာဂါထာရွတ်ဆိုခြင်း ဟူသော အစီအစဉ်များကို သူ့မိတ်ဆွေများအား သူက ကြိုတင်ကြွားစနစ်ဖြင့် ချပြထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော်မည့်ကိစ္စ မနာလိုမဖြစ်ကြလေနှင့် ငါ့ရှင်တို့ ..;)
မင်္ဂလာပါဠိဂါထာရွတ်ဆိုရာတွင် သူတစ်ဦးတည်း ရွတ်ဆိုခြင်းထက် သူ့တပည့်ကျော် တိဘက် ဘုန်းကြီးလေး များနှင့် တွဲဘက်ရွတ်ဆိုရလျှင် ပါဠိဌာနဖွင့်လှစ်ထားခြင်း၏ အသီးအပွင့်ကို ဒလိုင်လားမား ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခွင့် ရသွားနိုင်ပါသည် ဟူသော သူ့အဆိုကို ကော်မတီက လက်ခံသည့်အတွက် မင်္ဂလာဂါထာရွတ်ဆိုနည်းကို သင်ပေးနေရသည်။ မြန်မာသံဖြင့် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာအသံဖြင့် ပူဇော်ရွတ်ဖတ်ရန်သာ သင်ကြားပေးမိသည်က နိုင်ငံတကာကို ကိုယ်စားပြုသော မြန်မာရဟန်းတစ်ပါးအဖြစ် သူနှစ်ခြိုက်ပျော်ဝင်မိ၍ ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ဗုဒ္ဓဂယာတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များ သာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကြီးဧကာဒသမနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ကြီး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တာဝန်မှ အနားယူပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒွါဒသမနှစ်ပတ်လည် သက်တမ်းအတွက်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်တော့ကြောင်း သံဃာတော်များထံ ခွင့်ပန်လျှောက် ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (မိတ်ဆွေရဟန်းတစ်ပါးကတော့ ပြန်ရွေးမယ် ထင်လို့လား ဟု ပြုံးပြုံးလေး မေးသည်။ အဟမ်း အဟမ်း )
အိန္ဒိယသို့ ထွက်လာခြင်း၏ အဓိကခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည့် ပညာရေးလမ်းကို တစိုက်မတ်မတ် ပြန်လည် လျှောက်လှန်းရန် အရေးတကြီးလိုအပ်လာသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ တိဘက် တက္ကသိုလ်တွင် ဧည့်ပါမောက္ခ ဖြစ်လာခြင်းက သူ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ ကံဆိုးနိုင်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် ဒုတိယ အဓိပတိက အစ ပါမောက္ခများအလယ် ကျောင်းသားများအဆုံး သူသည် တစ်ဦးတည်သော ထေရ၀ါဒ ပိဋကတ်နားလည်သူဟု ယုံမှတ်ထားကြပြီဖြစ်သည်။ အချိန်မရွေး ပိဋကတ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ တက်လာနိုင်သည်။ တကယ်လည်း မေးကြသည်။ ယခုအချိန်ထိတော့ တည့်နေသေးသည်။ တစ်ချိန်ချိန် ထူးအိမ်သင်၏ အလွဲများတွင် သူ့အမည်မပါအောင် ၀မ်းစာဖြည့်ရချေဦးမည်။ (ဖြီးသော ပါမောက္ခမဖြစ်ရေး ဒို့အရေးးး )
မည်သို့ဖြစ်စေ သူ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်သည့်နှစ်မှ စတင်ကာ အဖွဲ့ကြီးက ပေးအပ်သည့် တာဝန်အရပ်ရပ်ကို ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့သည်က လောကုတ္တရအမြတ်အစွန်းဖြစ်သည်။ အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် သုံးနှစ်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ကြီး၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နှစ်နှစ်တာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ဧကာဒသမ နှစ်ပတ်လည်မှာတော့ အဖွဲ့ကြီး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့လေသည်။ ထိုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ပညာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူကာ အဖွဲ့ကြီး ပညာ ရေးမြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သည် ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ (ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ မစ္စတာရစ်ပလေ)
စင်ကာပူနိုင်ငံ အဘိဓမ္မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဖွဲ့ဝင်ဥပါသိကာမလေး တစ်ဦးနှင့် အွန်လိုင်းတွင် ဓမ္မမိတ်ဆွေအဖြစ် ကြုံကြိုက်ရာမှ သူ ပါဠိစာပေသင်ကြားပို့ချနေသည့် တိဘက်တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာထေရ၀ါဒပိဋကတ် အစုံလှူဒါန်းရေးဟူသော စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခု ရရှိခဲ့ကြသည်။ သူမက စိတ်အားထက်သန်စွာ သူမတို့၏ အဖွဲ့ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များကို တင်ပြရာမှ ယခု အခါ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်လှူဒါန်းနိုင်မည့် အဆင့်ရောက်နေပြီ ဟု အားတက်ဖွယ်ရာ သတင်းစကား ယမန်နေ့က ရောက်လာသည်။
ဗာရာဏသီတိဘက်တက္ကသိုလ်သည် အမှန်တော့ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းဝင်ကျောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထေရ၀ါဒပိဋကတ် ကျမ်းစာများကို မြတ်နိုးခုံမင်စွာ သင်ယူလေ့လာရန် တက်ကြွနေကြသည်။ ရဟန်းမင်းကြီး ဒလိုင်လားမားကိုယ်တိုင်က တိုက်တွန်းအားပေးနေခြင်းဖြစ်၍လည်း အထင်ကရတိဘက် တက္ကသိုလ်က ပါဠိဌာနတစ်ခု အပီအပြင်ဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု လောလောဆယ်ဆယ်တော့ ဌာနစိတ်လေး တစ်ခု အဖြစ်သာ မိတ်ဆက်နိုင်သေးသည်။ မကြာမီတွင် ထေရ၀ါဒပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို တိဘက်ဘာသာ စကားသို့ ပြန်ဆိုနိုင်တော့မည် ဟု မျှော်လင့်နေကြပြီ။
သို့အတွက် ရည်ညွှန်းကိုးကားစရာ ထေရ၀ါဒပိဋကတ်အစုံလိုအပ်လှသည်။ ထိုကွက်လပ်ကို အ ဘိဓမ္မာဖောင်ဒေးရှင်း မြန်မာလူငယ်များက ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါလိမ့်မည်။ တိဘက်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်တွင် ထေရ၀ါဒ ပိဋကတ်ကျမ်းစာများ ထားရှိခြင်းဖြင့်လည်း သူအပါအ၀င် တက္ကသိုလ် ပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များ အားလုံးအတွက် ပါရဂူဘွဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ရည်ညွန်းကိုးးကား ကျမ်းများ ရှာဖွေရန်လည်း များစွာ အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။
ဤအလှူဒါနမဖြစ်ပေါ်မီက သူကြိုတင်မှာထားချက်တော့ ရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်အမည်ကိုသော်လည်းကောင်း သူ့အမည်ကိုသော်လည်းကောင်း ဖော်ပြကြော်ငြာပြီး အလှူမခံရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်လည်း ကြော်ငြာမပါဘဲ အလှူက အားရဖွယ်ပြည့်စုံခဲ့ပါသည် တဲ့...။ ကောင်းလေစွ..။ ညီလာခံအမီလှူဒါန်းရန် မြန်မာနိုင်ငံက မည်သို့ သယ်ဆောင်မည်နည်း ဟူသော အရေးသာ ကျန်တော့သည်။
သူသည် ငယ်စဉ်က အလုပ်များချင်ဟန်ဆောင်ဖူးသည်။ ဆရာဘုန်းကြီးအကြိုက် စာကြက်ချင်ဟန်ဆောင်သည်။း) ပိဋကတ်သင်ရိုးစာအုပ်ကြားတွင် ကာတွန်းအောင်ရှိန်၏ ဦးရှံစားနှင့် ဦးဒိန်းဒေါင်တို့ ပဲပြုတ်ဝယ်နေကြသည်ကို ဆရာဘုန်းကြီး မသိ..။ သူက လိုအပ်ချက်အရ ဟန်ဆောင်ခြင်းကို ကြိုက်သည်။ မကြားချင်ဟန် မမြင်ယောင်ပြုခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။း)
သို့သော် သူက ဟန်လုပ်ခြင်းတော့ မနှစ်ခြိုက်ပါ။ ခုတော့ သူသည် တကယ်အလုပ်များနေကြောင်း ရေးနေသည်လား မသိ။ ပြန်ဖတ်ကြည့်ဦးမှ..။ ဤသည်လည်း ဟန်ဆောင်ခြင်းသော်လည်းကောင်း ဟန်လုပ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရာပေတကား။ သာဓု သာဓု သာဓု မီလျံ..။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 9:02 PM
မော်ဒန်...မော်ဒန်.နဲ.နာမည်ကြီးနေတာတော.ကြာပါပြီ အပြောအဟောတွေကတော. တကယ်...မော်ဒန်...အစစ်ပါ။ပုံကတော. မော်ဒယ်...မဖြစ်ပါလားနော်